Hindoisma eto Madagasikara - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Hindoisma ao Madagasikara)
Ny hindoisma eto Madagasikara dia fivavahana avy any India ka ny mpanaraka azy dia saika ireo ataon'ny Malagasy hoe Karàna izay raha ny tena marina dia Indiana, na dia tsy Hindoa avokoa ny Indiana monina eto Madagasikara.
1 Fidirany teto Madagasikara
2 Amin'izao fotoana izao
3.1 Rohy anatiny
Fidirany teto MadagasikaraHanova
Ny tantaran'ny hindoisma eto Madagasikara dia nanomboka tamin'ny nahatongavan'ireo Indiana Gojaraty voalohany avy any amin'ny faritr'i Saorashtra any India tamin'ny taona 1870 tany ho any, tamin'i Madagasikara mbola nozanahan'ny Frantsay. Amin'ireo mpiavy ireo dia ny Silamo no betsaka (dia Khoja sy Ismailý na Ismaeliana ary Daodý Bohra) fa ny Hindoa kosa dia vitsy.
Ny International Religious Freedom Report 2006 dia nitatitra fa ahitana Hindoa vitsy eto Madagasikara. Ny ankamaroany dia mpandraharaha moninana eto Madagasikara efa misy taranaka maro nifandimby. Ny ankamaroany dia miteny hindý na gojaraty, fa ny sasany kosa miteny amin'ny fiteny indiana hafa. Amin'izao fotoana izao dia miteny amin'ny fiteny telo fara-fahavitsiny ireo taranaka taty aoriana, ka isan'ireo fiteny ireo ny fiteny frantsay sy anglisy sy gojaraty ary malagasy.
Hindu Association in Madagascar
↑ Ny Khoja na Koja dia ilazana ireo mponina niova finoana ho Silamo ao India sy Pakistàna.
↑ Ny Ismaeliana na Ismailỳ dia ilazana sampana iray ao amin'ny Finoana silamo shiita.
↑ Sampan'ny Finoana silamo shiita ny Daodý Bohra.
↑ NRI (PDF) Tahiry tamin'ny 06/02/2012.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Hindoisma_eto_Madagasikara&oldid=995077"
Dernière modification le 27 Jolay 2020, à 07:15
Voaova farany tamin'ny 27 Jolay 2020 amin'ny 07:15 ity pejy ity.